प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ – Nepal Japan
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ
सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ- देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए हस्ताक्षरकर्ता एमाले र जसपाका सांसद कुन पक्षको हुने ?
नेपाल जापान ३ असार १६:५०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको आदेश बमोजिम लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । जवाफमा उहाँले संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई मात्र दिएको भन्दै शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार नभएको जवाफ दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । सोही रिटको सुनुवाईपटि मागिएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो दावी गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्रि गरी पाउँ भनेर दिइएको निवेदनमा एमालेका सांसदहरुको पनि हस्ताक्षर रहेको सन्दर्भ निकाल्दै यदि देउवा प्रधानमन्त्री भए हस्ताक्षर गर्ने एमाले र जसपाका सांसदहरु सत्तापक्षको हुने कि विपक्षी हुने भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
उहाँले लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ । कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले)कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दैसरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरुले हुने भएकाले जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ मैले मिति २०७७÷९÷५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारणहरु ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । कानूनी छिद्रहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन् । त्यसैले कुनै प्राविधिक कानूनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरुपणयोग्य हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफको सारसंक्षेप :
१. संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन :
२. दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन :
३. धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत छ :
७. मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिए :
८. वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन र छैन :
११. राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ :
१३. निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो :
१५. जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो :
प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरुले हुन्छ । मैले मिति २०७७/९/५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारणहरु ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । कानूनी छिद्रहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन् । त्यसैले कुनै प्राविधिक कानूनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरुपणयोग्य हुन सक्दैन ।
१८. कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ :